WAALI: Bournemouth 4-0 Chelsea- Blues Oo Guuldaro Fadeexad Ah Kala Soo Laabtay Bournemouth,Xili Arsenal & Man United Ay Furad Wayn Heleen. - Latest football news
WAALI: Bournemouth 4-0 Chelsea- Blues Oo Guuldaro Fadeexad Ah Kala Soo Laabtay Bournemouth,Xili Arsenal & Man United Ay Furad Wayn Heleen.
Chelsea ayaa guuldaro waji gabax ah kala soo laabtay kooxda Bournemouth iyada oo Blues iska qasaarisay fursad kale oo ay ku si adkaysan kartay kaalinta afraad ee Premier league. Chelsea ayaa guuldaro 4-0 ah kala soo kulantay kooxda Bournemouth waxayna guuldarada soo gaadhay Blues faa’iido wayn u tahay Arsenal oo xalay guul ka sii gaadhay Cardiff City.
Chelsea ayaa hadda u muuqata in ay gabi ahaanba lumisay dhibcihii ay ka saraysay Arsenal waxayna wadaagaan min 47 dhibcood halka ay min laba dhibcood oo kaliya ay ka sareeyaan Manchester United.
In Chelsea ay guuldaro 4-0 ahi ka soo gaadhay koox Bournemouth oo kale ah waxay waji gabax iyo fadeexad ku tahahy kooxda Maurizio Sarri oo halis galinaysa in ay xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah seegto Champion League.
Kaydka: Willy Caballero, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, Willian, Olivier Giroud.
Kaydka: Asmir Begovic, Charlie Daniels, Chris Mepham, Diego Rico, Jordon Ibe, Lys Mousset, Dominic Solanke.
Kooxda Bournemouth ayaa qaab ciyaareed cajiib ah kala hortimid Chelsea oo hamigeedu ahaa in ay sii xoojisato kaalinta afraad laakiin Bournemouth ayaa kooxda Sarri tustay sida ayna uliiteen kulankan.
Bournemouth ayaa wacdaro ku dhigtay Chelsea waxayna sii xumaysay rajadii ay Chelsea ka qabtay in ay sare uga sii baxdo Arsenal oo guul ka sii gaadhay Cardiff balse waji gabixii ay Bournemouth ku soo dhigtay Chelsea ayaa noqday mid hadal hayn reebay.
Inkasta oo qaybtii hore ee ciyaarta ayna labada kooxood awoodin in ay goolal kala dhaliyaan haddana waxaa jiray fursado badan oo gool dhalineed ah iyada oo Kovacic uu daqiiqadii 7 aad birta u garaacay Bournemouth balse sidoo kale kooxda martida loo ahaa ee Bournemouth ayaa fursado fiican iska lumisay.
Laakiin qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa noqotay mid gabi ahaanba ka duwan sidii ay ciyaartu ahayd qaybtii hore waxayna Bournemouth la soo baxday qaab ciyaareed ay Chelsea kaga yaabsatay.
Daqiiqadii 47 aad kooxda Bournemouth ayaa bilawday dhul gariirka ay ku dardartay Chelsea waxaana goolka furitaanka u saxiixay Josh King kaas oo caawin ka helay Brooks wuxuuna goolkan noqday mid Chelsea ay naxdin ka qaatay iyada oo ciyaartu noqotay 1-0 ay Bournemouth hogaanka kula wareegtay.
Daqiiqadii 59 aad Kante ayaa ugu dhawaaday in uu Chelsea ciyaarta ku soo celiyo kadib markii uu ka baxsaday xidigii dhinayay laakiin fursadan ayaan noqon mid ciyaarta wax ka badalay waxayna Chelsea bilawday in ay raadiso goolka barbaraha.
Daqiiqadii 61 aad Sarri ayaa ciyaarta ka saaray Pedro wuxuuna kaydka uga yeedhay Willian laakiin Bournemouth ayaaba markan noqotay kooxda dagaalka ugu jirtay in ay goolka labaad ee kalsoonida keensato.
Daqiiqadii 63 aad Labadii xidig ee Bournemouth goolka furitaanka iskaga soo kaashaday ayaa markale ugaadhsaday Chelsea iyada oo Brooks uu gool dhaliye markan isku badalay halka Josh King uu gool caawiye noqday waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay si lama filaan ah Bournemouth hogaanka ugu dheeraysatay.
Daqiiqadii 65 aad Maurizio Sarri ayaa ciyaarta soo galiyay Giroud isaga oo saaray Gonzalo Higuaín oo kulankiisii Premier league ugu horeeyay si wayn ugu fashilmay, laakiin Chelsea ayaa wali ciyaarta ku dhibtoonaysay.
Daqiiqadii 74 aad Bournemouth ayaa murugo kale ku abuurtay Chelsea waxayna dileen rajadii soo laabasho ee Blues ku fikiraysay kadib markii uu Josh King dhaliyay goolkiisii labaad ee kulanan iyo kan saddexaad ee kooxdiisa Bournemouth isaga oo caawin ka helay Stanislas.
Ciyaarta ayaa noqotay 3-0 ay Bournemouth ku dubanayso Chelsea isla markaana ay Blues garan wayday qaabkii ay ciyaarta ugu soo laaban lahayd.
Dhamaadkii ciyaarta intii lagu jiray daqiiqado dheeri ah oo lagu daray kooxda Bournemouth ayaa ceebta ku sii kordhisay Chelsea iyada oo Charlie Daniels uu goolka afraad ciyaarta ku soo xidhay si uu natiijada uga dhigo 4-0 sidaa ayayna ciyaartu ku dhamaatay iyada oo Blues soo gaadhay guuldaro aanu Sarri sharixi karin.
Way ku dhacday chelsea